Uri Sei Kushambadzira Yako Brand Kugara nekusiyana? | Martech Zone
Earth Day yaive ino svondo uye takaona zvakajairika kumhanya kwemasocial posts uko makambani akasimudzira nharaunda. Nehurombo, kumakambani mazhinji - izvi zvinongoitika kamwe chete pagore uye mamwe mazuva vanodzokera kubhizimusi senguva dzose.
Vhiki rapfuura, ndakapedza musangano wekushambadzira pane imwe kambani hombe muindasitiri yehutano. Imwe yemapoinzi andakaita mukati memusangano ndeyekuti kambani yavo yaida kushambadza zvirinani zvinoitwa nekambani yavo pane zvakatipoteredza, kuenderera, kubatanidza, uye kusiyana.
Mumakore apfuura, makambani aigara achisundidzira chikamu chemubhadharo wavo kune mamwe mabhenefiti makuru, vachirasira kunze kuburitswa pamupiro wavo, uye ndokudaidza zuva. Izvo hazvichacheke zvakare. Vese vatengi nemabhizinesi zvakafanana vari kutsvaga kuita bhizinesi nemakambani anopa zvinhu nemasevhisi avanoda… asiwo vari kuita mukubatsira veruzhinji. Kwete chete vatengi vari kutsvaga izvi, ndozvakaitawo vedu vanotarisira vashandi.
Kunyange ivo vari mutengi, ini ndakanyatso kufadzwa nemabatiro acho Dell Technologies yakazvipira kuvaka yavo yemagariro kukanganisa mune yavo cheni cheni uye yekambani tsika. Ivo muenzaniso wakanaka wekutevera. Zvakare, vakaenderera mberi nekutyaira hunyanzvi, vari kukwikwidza sekare, uye havasi kupa zvibereko kuti vadaro. Ivo vanoziva kuti haisi iyo chete iyo chinhu chakarurama kuita, iri zvakare rakakura bhizinesi zano.
Heunoi mumwe muenzaniso unoshamisa… Dell anotorazve mapurasitiki egungwa mumapakeji avo. Kubata kwavo uye basa rezvakatipoteredza harimire ipapo, zvakadaro. Kunze kwekudzoreredza, ivowo vari kushanda pa eco-kunyora, kudzikisa simba, uye kudzikira tsoka dzekabhoni. Vakaisa kusimudzira pane zvese zvinongedzo mune yavo yekushambadzira cheni.
Kusiyana uye Kubatanidzwa
Dell zvakare akavhurika uye akatendeseka nezve kushomeka kwekusiyana uye kusanganisa muindasitiri yetekinoroji. Izvi zvakatungamira kune vashoma uye vakadzi vasina mukana une vamwe mune indasitiri. Dell akazvipira zviwanikwa, kuisa mari muzvirongwa zvekutanga-zveudiki zvepasirese pasi rose, kuti zvive pachena kwazvo mukuzivisa kwavo. Ivo zvakare vakaiisa kumberi nepakati mukushandira kwavo:
Kubuda pachena uye Kuzivisa
Kujeka kwave kuri kiyi zvakare. Dell ane kugara uchitaura pane kufambira mberi kwayo, kuisa zvavanoita pamberi nepakati kuitira kuti vatengi, mabhizinesi, uye vanoita mari vazive nezvekufambira mberi kwavo. Ivo havambotaura kuti vanayo wakasimba idzi nyaya, asi zviri pachena vanoramba vachitaura uye vachiratidza mafambiro avo. Uku kushambadzira kukuru.
Ini ndinokukurudzira iwe kuti unyore uye uteerere iyo Dell Mwenje podcast iyo yandinosangana nayo Maka Schaefer. Isu tine chigaro chekutanga-mutsara, kubvunzurudza vatungamiriri, vanobatirana, uye vatengi veDell vari kuita mutsauko uyu.
Dell Mwenje Podcast
Saka, nderipi zano rako rekambani uye chiratidzo chako chiri kutariswa sei kubva pakuona kwekugara zvakanaka? Pane zvinhu here zvaunogona kuita kuti uchinje maitiro ako emukati kugadzirisa kusimudzira uye kubatanidza? Uye, zvakanyanya kukosha, ungataure sei kuedza uku zvinobudirira kune ako tarisiro uye vatengi?
Uye usakanganwe ... kupa mari hakuna kukwana. Vatengi nemabhizimusi vari kutarisira kuona zvemagariro zvakanaka yakadzika mukati mutsika yako uye mune zvese maitiro. Mutengi wako anotevera kana mushandi anoda kuziva kuti wakazvipira kuita kuti nyika ive nzvimbo iri nani, kwete kungoisiya kuti mumwe munhu aite.
Tags: kusiyanakwezvakatipoteredzamapurasitiki egungwamuchiutokuchengetedza
Extole: Brand Advocacy uye Referral Kushambadzira